TANIKO TANANA ROV NY MIKASIKA | Fanadiovana tanky solika lavitra
Fikarohana momba ny fanadiovana ny fiara sy ny fitaterana tank
ROV sy rafitra fanadiovana maloto
Ny rafitra fandefasana entana tsy manadio
akaiky ny Menu
Dikan-tsokosoko amin'ny fivarotana Tank
TANORA TANANA ROV
Tanksweeps 18 santimetatra
Tanksweeps 8 santimetatra
Rafitra fanarenana solika
Kitiho ny bokotra
TANANA FITSIPIKA TANK ROV
Fanadiovana tanky tsy an-doharano solika avy any ivelany, farany, a crawler fanadiovana tanky lavitra tena miasa izany. ”THE STRIKER” manao an'izany.
Ilay STRIKER SUPER CRAWLER dia ho an'ny fanadiovan-tsolika solika solika mibaribary hatramin'ny 110m (330 metatra) ny savaivony. Tsy tokony hafangaro amin'ireo kilalao karazana Tonka maro any izay hita fa tsara izany. Mety ho tsara tarehy izy ireo nefa, apetraka ao anaty fitoeran-tsolitany miaraka amin'ny fotony malemy mavesatra 50 na mahery. Avy eo afatory amin'ny fantsom-bovoka feno fotaka ao aoriany. Andeha hojerentsika izao ny halavirana raha afaka miditra ao anaty fitoeran-tsolika solika izy. Hatraiza ny halavany alohan'ny hijanonany na hamatorany tena amin'ny fatotra manodidina ny tongony tampon-trano.
Kilalao tsara ho an'ny zanakao. Ho an'ny orinasan-dehilahy manadio tanka solika dia mila vitaina ilay asa. Mila ny tena fifanarahana amin'ny mpikapoka CRAWLER MANJOZA SUPER TANK. Ny mpanoratra dia nanandrana ireo rafitra sy fiovana rehetra ireo nandritra ny 25 taona mahery ary mahalala tsara izay mandeha sy izay tsy mandeha.
Ny fianarana ny lesona fa tsy mandeha amin'ny fiara mifono vy ireo rafitra ireo raha tsy foana ny tanky. Na dia misy tanky foana aza ny olana taloha dia ny fametahana ny umbilical ROV amin'ny fatotra manodidina ny tongony tampon-trano dia midika fa ny lehilahy dia tokony hiditra ao anaty tanky hamaha ny olana. Mazava ho azy, mandresy ny teny hoe "tsy fidiran'olona".
Ka amin'ny STRIKER ROV dia voavaha io olana io ary olana maro hafa ananan'ireo ROV hafa.
Ny STRIKER dia miditra tanky amin'ny sombin-javatra iray amin'ny alàlan'ny lalana 24-inch amin'ny alàlan'ny lalambe fampidirana manokana.
Ny STRIKER dia manana tobim-jeometrika miovaova izay miditra amin'ny tanky amin'ny toerana mihidy.
Raha vantany vao tafiditra ao anaty tanky dia ahetsehin'ny mpandraharaha ny fanokafana ny base track ka ny ROV izao dia sehatra marin-toerana izay tsy hipongatra toa ny ataon'ny ROV hafa ary avy eo mitaky ny lehilahy hiditra ao anaty tanky mba hanitsiana ny olana.
Ny mpandraharaha dia mampiakatra ny tafondro mahery miaraka amin'ny fakantsary sy ny famoriam-bola ao amin'ny toerany.
Ny tafondro mahery STRIKER miaraka amina fakan-tsary sy fikaonan-jiro dia misy fihodinana miampy fiakarana ary fihenan'ny lalana.
Raha vantany vao tafiditra ao anaty tanky ny mpandraharaha dia afaka mitondra ny STRIKER mankany amin'ny foiben'ny tanky. Raha misy haavon-tsetroka lalina dia mampiasa ny tafondro ny mpandraharaha mba hametahana an'io ary hanapaka lalana iray mamakivaky ilay maloto mankany amin'ny foiben'ny tanky. Ny paompy maloto mandeha amin'ny herinaratra dia napetraka ao anaty lalan'ny tanky na mifandray mivantana amin'ny teboka iray hanesorana ilay fotaka maloto.
Avy eo afovoan'ny tanky, ny mpandraharaha dia afaka mitarika ny jet tafondro amin'ny alàlan'ny fametahana ilay fotaka izay hikoriana mankany amin'ny paompy maloto hydraulic. Noho ny fihodinan'ny fakan-tsary sy ny fikaonan-jiro dia mijanona amin'ny toerana iray ihany ny STRIKER mandritra ny fametahana. Azo atao izany amin'ny fihodinana 270 degre ary 170 degre ambony / midina amin'ny fivorian'ny tafondro. Izy io koa dia misoroka ny loza mety hitrandrahana ny elovika STRIKER mifatotra amina tadivavarana na fatotra manodidina ny tongotry ny tafontrano mandehandeha ao anaty tanky.
Ny tsara indrindra dia ny STRIKER no ampiasaina amin'ny SUPER MANWAY CANNON rafitra fanadiovana tanky. Ny herin'ny herinaratra sy ny herinaratra 12v dia omen'ny singa HPU avokoa. Ny tsindry ho an'ny Cannon STRIKER dia omena amin'ny paompy fanamafisam-peo mandeha amin'ny herinaratra. Ny paompy maloto amin'ny famoahana ilay fotaka vita anaty rano dia mandeha ho azy ihany koa amin'ny alàlan'ny herin'ny hydraulic. Ny fijanonana / fanombohana ary ny hafainganan'ny paompy dia fehezin'ny mpandraharaha ao amin'ny efitrano fifehezana ka ny fanerena sy ny fikorianana dia azo ahitsy mifanaraka amin'ny toe-piainana ao anaty tanky.
Ny fanaraha-maso GAS na Oksizenina ny tanky diovina dia amin'ny alàlan'ny mpamantatra izay napetraka ao amin'ny vatan-tafondro manway miorina amina tank tank. Izany dia manome ny mpandraharaha faharoa overfahitana ny toerana misy ny ROV ao anaty tanky. Ny rafitra gazy sy oksizenina dia hanidy ny rafitra raha toa ny haavon'ny gazy na oksizenina mihoatra ny fetra voafaritra ary tsy hamela ny fandidiana bebe kokoa raha tsy efa novaina ny haavony.
Ny potipoti-javatra vita amin'ny rano dia alefa ao amin'ny CANNON MANARAKA INDRINDRA Fantsona Weir ho an'ny fisarahana voalohany ny solids mavesatra sy ny sivana farany amin'ny ranoka alohan'ny hamerenana am-bisikileta azy amin'ny alàlan'ny paompy fanerena sy amin'ny alàlan'ny tafondro. The Weir tanky dia miaraka amina detection gazy sy oxygen, avo sy ny fanairana ambany sy ny paompy lobe an-tsambo dia fehezin'ny mpandraharaha ihany koa ary ny herinaratra dia omena avy amin'ny singa HPU.
Raha mila milina mandeha ianao dia asio mpamorona sy mpanadio za-draharaha. Izay no maha-isika antsika, ary fantatsika ny tena toetrany ao anaty fitoeran-tsolika sy ny fepetra tokony horaisina. Ny sucess dia fahalalana sy traikefa amin'ny sehatry ny fanadiovana tank.
Hatramin'ny 1975 ny mpiasa ao amin'ny PRO-LINE HYDRALINK dia nanorina laza ho an'ny famokarana fitaovana vita amin'ny akora vita amin'ny kalitao avo lenta mba hampiasaina amin'ny orinasa isan-karazany ao anatin'izany ny entona solika sy ny hydraulika mampiasa ny fahalalany midadasika nandritra ny taona maro tao anatin'ireny indostria ireny.
Theme an'ny indostrian'ny indostria 2019 PRO-LINE Hydralink Webmaster tbfrance@gmail.com Copyright PRO-LINE HYDRALINK 2020 zon'ny mpamorona rehetra voatokana.	Volavola & Novolavolain'i Tema VW